सरकारको अनुमान भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले लगाए कोरोना खोप,केही ठाउँमा अभाव, अब कति बाँकी छ खोप ? – NamoBuddha Khabar
सरकारको अनुमान भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले लगाए कोरोना खोप,केही ठाउँमा अभाव, अब कति बाँकी छ खोप ?
शनिबार, फाल्गुण २९, २०७७ | २०:५८:२३ |
काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरु गरेको दोस्रो चरणको कोरोना खोप अभियानमा जेष्ठ नागरिकहरुको उल्लेख्य सहभागिताका कारण देशका विभिन्न स्थानमा खोप अभाव देखिन थालेको छ ।
मन्त्रालयका परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डां झलक शर्मा गौतमले मन्त्रालयले अनुमान गरेभन्दा खोप लगाउनेको संख्या बढी भएपछि केही स्थानमा खोप अभाव देखिएको बताए । उनले खोप अभियान नरोकिने गरी बैकल्पिक व्यवस्थासमेत गरेको जानकारी दिए ।
‘केही स्थानमा हामीले सोचेभन्दा उत्साहजनक सहभागिता भयो। ती स्थानमा केही समय खोपको अभाव पनि देखियो’, गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘तर, हामीले खोप अभियान रोकिन नदिन नजिकैको खोप केन्द्र र काठमाडौंबाट पनि थप खोप पठाउने व्यवस्था मिलाएका छौं।’
गत फागुन २३ गतेबाट सरकारले ६५ वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक, अध्यापक, शिक्षक तथा पहिलो चरणको अभियानमा छुटेकाहरुलाई खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल केन्द्रबाट खोप लगाउँदै यो अभियानको सुरुवात गरेका थिए।
दोस्रो प्राथमिकतामा सरकारले १७ लाख ८२ हजार ४६९ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। त्यसमध्ये पहिलो पाँच दिन ९बिहीबार साँझसम्म०मै ५१ प्रतिशत अर्थात ९ लाख ११ हजारले खोप लगाइसकेका छन्। मन्त्रालयमा शुक्रबारको तथ्यांक आइसकेको छैन।
दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको पहिलो दिन २३ गते २ लाख ३१ हजार ९९८, २४ गते २ लाख ४२ हजार ५०२, २५ गते १ लाख ५४ हजार, २६ गते ६४ हजार ९७४ जनाले खोप लगाएका छन्।
सुरुवाती पाँच दिनमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकले खोप लगाएका छन्। बागमतीमा १ लाख ७६ हजार, प्रदेश २ र लुम्बिनीमा १ लाख ६६ हजार, प्रदेश एकमा १ लाख ४२ हजार, सुदूरपश्चिममा ९९ हजार, गण्डकीमा ९८ हजार र कर्णालीमा ६० हजार जेष्ठ नागरिकले खोप लगाएका छन्।
‘अभाव भएका स्थानमा हामीले जतिसक्दो चाँडो खोप पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ डा। गौतमले भने, ‘हामी खोप अभियान रोकिन दिदैनौं। सबैलाई खोप लगाउन जान अनुरोध गर्दर्छौँ।’
मन्त्रालयले देशभरका ६ हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइरहेको छ। खोप लगाउन चाहने जेष्ठ नागरिकले उमेर खेल्ने परिचयपत्र वा वडाको सिफारिस पत्र लिएर खोप लगाउन सक्ने उनले बताए। जेष्ठ नागरिकको सिफारिसपत्र बनाईदिन स्थानीय निकायलाई सहजीकरण गरिदिन आफूहरुले अनुरोध गरेको गौतमको भनाइ छ।
सरकारले कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत १ दशमलव ४ प्रतिशतलाई खोप प्रदान गरिएको थियो।
दोस्रो चरणको खोप अभियान देशभरका ६ सय बढी खोप केन्द्रबाट लगाइँदैछ। यसका लागि १६ हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीले खोपप्रति नकारात्मक धारणा परिवर्तन भएपछि खोप लगाउने संख्यामा वृद्धि भएको हो।
‘पहिले खोपबारे नकारात्मक सोच, साइड इफेक्ट आदि कारणले खोप लगाउन त्यति उत्साह थिएन’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा खोप लगाएका कसैलाई पनि जटिल समस्या नदेखिएकाले अहिले खोप लगाउन उत्साह बढेको छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिक बिहानैदेखि खोप लगाउन खोप केन्द्र गइरहनुभएको छ।’
खोपका कारण हालसम्म नेपालमा कसैमा पनि जटिल समस्या नदेखिएको उनले बताए। नेपालमा लगाइने खोप ‘कोभिशिल्ड’को प्रभावकारिता पनि ७० प्रतिशत बढी रहेकाले ढुक्क भएर खोप लगाउन उनले अनुरोध गरे।
कति बाँकी छ खोप ?
केही खोप केन्द्रमा खोप अभाव देखिन थालेपछि खोप नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि देखिएको छ। तर, मन्त्रालयले खोप उपलब्धताका आधारमा नै खोप अभियान सुरु गरेकाले अभाव हुन नदिने जनाएको छ ।
‘हामीले सुरुमा दोस्रो चरणमा ५५ वर्षभन्दा माथिकालाई खोप लाउने भनेका थियौं तर खोप कम उपलब्ध भएपछि ६५ वर्षमाथिलाई लगाउँदैछौं,’ मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘उहाँहरुको जनसंख्या अनुरुप दुई पटक लगाउन मिल्ने गरी खोपको हिसाब गरेका छौं। त्यसमा समस्या हुँदैन ।’
नेपाललाई भारत सरकारले सुरुमा दश लाख डोज खोप उपहार दिएको थियो। उक्त खोप ४ लाख ३८ हजार अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सरसफाइकर्मी, पत्रकार, विदेशी नियोगका कर्मचारीहरुलाई पहिलोमात्रा लगाई सकिएको छ ।
सरकारले सेरमबाटै थप २० लाख डोज खोप खरिदका लागि रकम दिएको थियो। जसमध्ये १० लाख डोज खोप नेपाल आएको छ भने बाँकी दश लाख डोज खोप आउँन बाँकी छ।
यस्तै कोभ्याक्स सुविधामार्फत पहिलो चरणमा पाएको ३ लाख ४८ हजार खोप पनि नेपाल आएपछि सरकारले गत २३ गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गरेको हो ।
‘हामीले दास्रो मात्रालाई पनि हेरेर खोपको उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेका हौं’, सचिव अर्यालले भने, ‘मार्च १५ भित्र खरिद गरेको थप दश लाख खोप पनि आउँछ। त्यसपछि हामी थप खरिदको प्रक्रियामा पनि जानेछौं ।’
सरकारले भारतबाटै थप ५० लाख डोज कोरोना खोप खरिद गर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
शुक्रबारसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या दुई लाख ७५ हजार ११८ पुगेको छ । त्यसमध्ये दुई लाख ७१ हजार १७७ जना कोरोना भाइरसबाट मुक्त भइ घर फर्किएका छन।
हाल देशभर ९२९ सक्रिय संक्रमित छन् भने संक्र्रमणबाट तीन हजार ११२ जनाको मृत्यु भएको छ।
फोटो र खबर : नेपाल खबर